मन जित्ने गरेर केटीसँग च्याटमा कसरी कुरा गर्ने ? - यादका टुक्रा
2 years ago 8181 Views
सुरुमा केटीहरु संग अनलाइन कुरा गर्न जोकोही केटालाई पनि मुस्किल हुनेगर्छ। तर जब कुराकानी सुरु हुन्छ तब सम्बन्ध बनाउन सहज हुने गर्छ। यस्ता धेरै अनलाइन साइटहरु छन् जसले च्याटको सुबिधा उपलब्ध गराएका छन्। जस्तै, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर आदिको सहयाताले तपाईं तपाइँलाइ सुहाउँदो स्वाभाव भएकी केटि संग कुराकानी गरेर सम्बन्ध बनाउन सक्नुहुन्छ। कुराकानी सुरु गर्नका लागि तल दिएका केहि टिप्सहरु ध्यानमा राख्नु भयो भने तपाईंलाइ सहज हुनेछ।
आधार चुन्नुहोस : धेरै वेबसाइट अनि एप्सहरु छन्, जसको सहायाताले तपाईं आफु संग रुची मिल्ने केटि संग कुराकानी अगाडी बढाउन सक्नुहुन्छ। यसका लागि पहिले तपाईं उपयुक्त प्ल्याटफर्मको चयन गर्नुहोस् । आफ्नो अनलाइन प्रोफाइललाइ सकेसम्म आकर्षक बनाउनुहोस् । जव तपाइँ कसै संग अनलाइन जोडिन चाहानुहुन्छ तब तपाइँको प्रोफाइल सुरुमा नै हेरिन्छ । त्यसैले यो कुरा ध्यानमा राखेर आफ्नो प्रोफाइल बनाउनु होस् । जसमा आफ्ना गुणहरुलाई राम्रो संगले प्रस्तुत गर्नुहोस् अनि नकारात्मककुरा सेयर गर्नबाट बच्नुहोस् । आफ्नो स्पेलिंग, गलत अर्थ लाग्ने पोस्टहरुमा ध्यान राख्नुहोस्। सबै नकारात्मक र असम्मान जनक फोटोहरु हटाउनुहोस् । भड्काउ अनि अश्लिल पोस्टहरु नराख्नुहोस् । आफ्नो व्यक्तित्व राम्रो संगले झल्काउने तस्बिर राख्नुहोस् ।
बिशेष अभिवादनका सब्द प्रयोग गर्नुहोस् धेरैजसो मान्छेहरु कुराकानीको सुरुमा “HI” “hello” जस्ता सब्दहरु प्रयोग गर्ने गर्छन् । यी सब्दको प्रयोग गर्नु कुनै गलत नभएपनि यी सब्दहरु धेरै नै प्रयोग भैसकेका छन् अनि यस्ता सब्द प्रयोग गर्दा उनले तपाइंलाई खास महत्व नदिन पनि सक्छिन् । कुनै खास अभिवादनको सब्द प्रयोगले यो सुनिस्चित गर्छ कि, उसलाई तपाइँको कुरा यादगार होस् । त्यसैले साधारण सब्दको साटो तपाईलाइ अरु भन्दा फरक सब्दको प्रयोगले उनको ध्यान जित्न सहयोग गर्छ । जस्तै “नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ?” “के हुँदैछ त जिन्दगीमा?” यस्ता बाक्यहरु उपयोगी हुन सक्छन् ।
उत्तर दिन सहज प्रश्न गर्नुहोस् अब जब तपाईं कुरा गर्न सुरु गर्नु भयो, तब समय आयो कि कुराहरु अघि बढुन् । यस्तोमा जवाफ बिहिन प्रश्नहरु बाट बच्नुहोस् । सरल प्रश्नहरु गर्नुहोस् । जब तपाइँ यस्तो गर्नुहुन्छ तब उसलाई तपाईं संग कुरा गरिरहन प्रेरणा मिल्छ । अनलाइन प्रोफाइलको मद्दतले उसको अनि तपाईंको केहि समान रुचीहरु पत्ता लगाउनुहोस् अनि त्यहि कुरा गरेर उसलाई पनि एकै धरातलमा ल्याउनुहोस् । “के तपाईंलाइ खेलकुद मन पर्छ?” भन्नुको साटो “तपाईंलाइ कुन खेल मन पर्छ?” भनेर सोध्नु फाइदाजनक हुनसक्छ । “म स्कुलमा पढ्दा मेरो एउटा साथि थियो, उसलाई हामि पांडू भनेर बोलाउने गर्थ्यौ। तपाइँको मिल्ने साथि को थियो?” यस्ता कुरा गरेर उसलाई पनि समान धरातलमा उभ्याउने कोशिस गर्नुहोस् ।
एकपटकमा एक मात्र म्यासेज गर्नुहोस् एकैपटक धेरै प्रश्न गरेर दिक्दार लाग्दो नबन्नुहोस् । उसको हरेक जवाफ पछी मात्र अर्को प्रश्न गर्नुहोस् । यसो गर्दा उनलाई तपाईं संग कुराकानी गरि रहन प्रेरित गर्छ ।
थोरै जिस्किनुहोस् उसको कुरा अनि व्यक्तित्वलाई ध्यानमा राखेर उसलाई जिस्काउनु होस् । उसको तारिफ गर्नुहोस् । आफ्नो सेन्स अफा ह्युमर देखाउनको लागि यसरि कुराहरुलाई मजेदार बनाउन जरुरि हुन्छ । “तपाईं संग गफ गरेर मेरो आजको दिन नै बन्यो ।” अनलाइनमा सबै ढोंग मात्र गर्छन् भनेर मलाइ लाग्न थालेको थियो त्यहि बेला तपाईं संग भेट भयो ।” यस्तो अवस्थामा तपाइँ उसको शारीरिक सुन्दरता नभएर व्यक्तित्वको तारिफ गर्नुहोस् । जसले गर्दा तपाईं उसको नजरमा एक असल व्यक्ति सावित हुनुहुनेछ ।
उसका कुराहरुमा फोकस राख्नुहोस् तपाइँहरु बिचमा कमन रुची अनि बानीहरु पता लगाउनुहोस् जसमा दुबैजना रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ । अनि आफ्ना व्यक्तिगत अनुभवहरु पनि बाड्नुहोस । तर मात्र आफ्नै मात्र कुरा गरेर त्यो कुराकानीमा तपाइँ हावी नहुनुहोस् । यस्तो देखाउनुहोस् कि, तपाइँलाइ ति नै कुरामा रुची छ जसमा उसलाई छ ।
आभारी रहनुहोस् यो भन्नुहोस् कि, ऊ संग कुराकानी गर्न पाएर तपाईं कति खुशी हुनुहुन्छ । ऊ संग फेरी कुराकानी गर्ने रहर सुनाउनुहोस् । “आज तपाइँ संग कुरा गरेर धेरै खुशी लाग्यो । फेरी अवश्य कुरा हुनेछ ।” यस्तो आभारयुक्त भाषामा ऊ संग बिदा माग्नुहोस् । हामी सबै कुनै न कुनै समयमा प्रेममा पर्छौं। जब यो भावना हाम्रो दिमागमा आउँदछ, हामी यो विश्वास गर्न थाल्छौं कि यहि प्रेम मात्र सत्य हो र अरु सबै कुरा झुटा हुन्।
जब मानिषलाइ प्रेम हुन्छ तब ऊ आफ्ना सपनाहरु अरु कसैको सोच संग बाँड्न सुरु गर्छ। तर के यो नै हो त साँचो प्रेम? केहि चीजहरू छन् जसलाई साँचो प्रेमको आधार मानिन्छ। यदि तपाईंको प्रेम सत्य हो भने तपाईंले यी चीजहरू कुनै न कुनै समय महसुस गरेको हुनुपर्छ र यदि तपाईंले त्यस्तो महसुस गर्नु भएको छैन भने अझै पनी समय छ। साँचो प्रेम कुनै पनि उमेरमा फेला पार्न सकिन्छ।
१) के तपाईंलाई यस्तो भएको छ कि, यदि तपाईं सडकमा एक्लै हिड्दै हुनुहुन्छ अनि तपाइंको दिमागमा मात्र त्यहि मान्छेको याद घुमिरहन्छ। तपाईका वरिपरि धेरै चीजहरू हुन्छन् तर तपाईको यादमा भने उही मान्छे मात्र आइ रहन्छ? यस्तो त्यहि अवस्थामा मात्र हुन्छ जव तपाईं कसैलाई साँचो प्रेम गर्नुहुन्छ। २) के तपाइँ आफ्नो मनपर्ने प्रेम गीत सुनेर मात्र उसैलाई याद गर्नुहुन्छ र तपाइँ लाग्छ कि गीतका प्रत्येक शब्द तपाइँलाई ध्यानमा राखेर लेखिएको छ? अनि आँखा चिम्लिएर उसलाई सम्झदै त्यो गीतका सब्दमा हराउनु हुन्छ? हो, साँचो प्रेम हुँदा अक्सर यस्तो हुने गर्छ। गीतका प्रत्येक सब्दमा आफ्नो सम्बन्ध कल्पना गरिन्छ अनि कहिले मुस्कुराउना थालिन्छ त कहिले आँशु झारिन्छ।
३) के तपाईंलाइ त्यस व्यक्तिको हरेक खराब र बचकाना व्यवहार पनि मन पर्छ र उसका गल्तीहरूलाई पनि प्रेम गर्नुहुन्छ? आफुले प्रेम गरेको मान्छेको बचपना पनि मन पर्छ। उसले गरेका गल्तिहरु पनि आफुलाई प्यारो लाग्छ। यदि तपाईंलाइ पनि त्यस्तो हुन्छ भने पक्का तपाइंलाई साँचो प्रेम भएको छ। ४) के तपाइँहरु बीच बहस भइ रहन्छ अनि अन्त्यमा सबै भुलेर सान्त हुनुहुन्छ? साँचो प्रेम गरेको मान्छे संग जति नोकझोक भएपनि केहीबेरमा सबै बिर्सिएर फेरी सामान्य हुनेगर्छ। प्रेम भएको सम्बन्धमा यस्ता मनमुटाव धेरै समय टिक्न सक्दैनन्।
५) के ऊ बाट केहि टाढा हुँदा तपाईं आफुलाई अधुरो महसुस गर्नु हुन्छ? चाहे तपाईं वरिपरी जतिसुकै मान्छे भएपनि तपाईंका नजर उसैलाई खोजि रहन्छन्? हो, साँचो प्रेम गरेको मान्छे संग केहीबेर टाढा हुँदा पनि बर्षौ बाट टाढा भए झैं महशुस हुन्छ। अनि कहिले ऊ संग नजिक हुने भनेर हतार भइ रहन्छ। ६) के ऊ दुखि हुँदा तपाइँ पनि दुखि हुनुहुन्छ? अनि तपाईं चाहानुहुन्छ कि जे गरेर भएपनि उसको दुख मेटाउन पाए हुन्थ्यो भनेर?
७) के तपाइंलाई आफ्नो प्रेममा पूर्ण भरोसा छ अनि तपाईलाई कुनै डर छैन कि, अब कुनै हालतमा ऊ टाढा हुन्छ भनेर? ८) के तपाईं उसलाई खुशी राख्नको लागि आफ्नो अरु महत्वपुर्ण कुरापनि छोड्न सक्ने तागत राख्नुहुन्छ ? ९) के तपाईं उसको आँफु संग जति झगडा भएपनि कसैले उसको बारेमा केहि नारामरो बोलेको तपाईं सुन्न सक्नुहुन्न ? १०) के अब तपाईं जे पनि गर्नुहुन्छ “हामि” भन्ने सोचेर गर्नुहुन्छ, के तपाइंले उसलाई पाएपछि “म” को भावना छोड्नु भएको छ ? ११) के तपाईंहरु कहिलेकाहिँ बाटोमा हिड्दा या अन्य ठाउँमा बस्दा हांसी मजाक गर्न थाल्नुहुन्छ अनि यो बिर्सनुहुन्छ कि तपाइँहरुलाई अरु मानिषले पनि देखि रहेका छन्?
१२) के तपाइंलाई अब कहीं पनि एक्लै हिड्न मन लाग्दैन ? अनि एक्लै भएको बेला ऊ संग भएको भए भनेर आशा राख्नु हुन्छ? १३) के अब तपाईंका नजिकका मान्छेले पनि यो सोध्ने थालेकी, बिहे कहिले गर्छु भनेर? १४) के तपाइँ मनमनै यो सोच्नु हुन्छ कि, मैले मेरो पार्टनरको लागि सबै भन्दा राम्रो बन्नु पर्छ किनकि ऊ धेरै राम्रो डिजर्भ गर्छ भनेर? यदि तपाइंलाई यी माथिका चिजहरु हुन्छन भने ढुक्क हुनुहोस्, तपाईलाई साँचो प्रेम भएको छ।
Don't Miss it एकअर्कासँग टाढा हुँदा कसरी फोनबाट नै सम्बन्धलाई रोमान्चक बनाउने ?
Up Next च्याखुरीको बोइफ़्रेन्ड – टुक्रा
छाला अनुसार कसरी हो सहि साबुन रोज्ने ? अनि कसरी पर्छ अनुहारमा फरक ?
नाच्न नजान्ने आँगन टेडो । कतिपय प्रयोग र विधीमा हामी चुकिरहेका हुन्छौ, अनि दोष चाहि अरुलाई दिइन्छ । खासगरी सौन्दर्य…
मेकअप नै नगरी घरैमा कसरी चम्किलो बनाउन सकिन्छ अनुहार ?
5 months ago 1955 Views
लामो आयु बनाएर रमाइलो जिन्दगी बनाउन सम्झिनै पर्ने ६ कुराहरु के के हुन् ?
5 months ago 3392 Views
स्वार्थी सम्बन्धमा छु कि भनेर कसरी थाहा पाउने ? कसरी जोगिने ?
बिहान उठ्ने बित्तिकै यी ७ काम नगर्नु भनेको किन दुख पाउनु हो ?
भनिन्छ, बिहानीको सुरुवात राम्रो हुनुपर्छ । तब दिनभरको पर्फमेन्स राम्रो हुन्छ । तर, हामी जानेर वा नजानेर यस्ता गल्ती गरिरहेका…
अहिले आँपको सिजन छ । तराई तथा पहाडी क्षेत्रमा आँप पाइने गर्छ । यस बेला हावाहुरी चल्ने सिजन पनि हो…
अम्बाका यी ७ फाइदाहरु जसले मानिसको स्वास्थ्यमा कायापलट गराउन सक्छ
भनिन्छ, मौसमी फलफूल सेवन गर्नु राम्रो हो । जाडो मौसममा पाइने अम्बा निकै स्वादिलो हुनुका साथै स्वास्थ्यवर्दक मानिन्छ । यो…
5 months ago 1242 Views